3 ဥရောပမြို့ကြီးများအကောင်းဆုံးရထားဖြင့် Visited | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >3ဥရောပမြို့ကြီးများအကောင်းဆုံးရထားဖြင့် Visited
ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် ဥရောပတိုက်တွင်လှပသောမြို့ကြီးများ, နှင့်ပိုပြီးဘာ, ထိုသူအပေါင်းတို့သွားရောက်နိုင်အောင်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်. ရထားလမ်းအားဖြင့်ခရီးသွားလာ ဤအရေပုံး-စာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ခရီးစဉ်. ဒီမှာပါ3အကောင်းဆုံးရထားလည်ပတ်ခဲ့ဥရောပမြို့ကြီးများ.
ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးအမွေနှင့်အတူရထားလည်ပတ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥရောပမြို့ကြီးများစတင်ရန်: အသုံး, ဘယ်လ်ဂျီယံ
ပိုပြီးဘယ်လ်ဂျီယံထက်ရှိရဲ့ ကိုယ့်ချောကလက်. Bruges တစ်တူးမြောင်းမြို့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျော်ကြား, ကဲ့သို့ ဗင်းနစ် နှင့် အမ်စတာဒမ်. တကယ်တော့, တစ်ခုလုံးကိုမြို့တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် site ကို. ရထား Bruges သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်ကတည်းကအလွန်ကြီးစွာသော idea က Bruges အဓိကဘူတာရုံ ရုံဖြစ်ပါသည် 10 မိနစ်အားလုံးအဓိကအနေဖြင့်လမ်းလျှောက် စျေးဝယ်လမ်းများ နှင့် 20 စျေးကွက်စတုရန်းမှမိနစ်. ဒါဟာအစအားလုံးကိုသည်အခြားအဓိကမြို့ကြီးများမှရထားကိုထောက်ပံ့ပေး ဘယ်လ်ဂျီယံ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် သေးငယ်သော, ပြင်သစ်, ပြီးနောက် Thalys ရထား ပဲရစ်–ဘရပ်ဆဲလ်-Ostend.
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် နှင့်များ၏လှပသောက်ဘ်ဆိုက်များကိုခံစား အသုံး. Mayo ပျော်မွေ့ရန်သေချာစေပါ fries နှင့်ဒေသခံတစ်ဦး ဘီယာ.
နေရောင်ခြည်များအတွက်: ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံ, စပိန်
သငျသညျအကောင်းဆုံးရထားလည်ပတ်ခဲ့နေရောင်ခြည်နှင့်ဥရောပမြို့ကြီးများနှင့် ပတ်သက်. မည်သို့ခံစားရ? အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Andalucian အကွောငျးဘာ ရှုခင်းများ နှင့် Moorish ဗိသုကာအတတ်ပညာ? ကောင်းသားပဲ? ထိုအခါရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံသင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားအများစုကခရီးသွားများအတွက် စပိန်မှရထားခရီးစဉ် ဘာစီလိုနာသို့မဟုတ်မက်ဒရစ်၏ထင်, ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်ရတနာနောက်ထပ်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်, စပိန်ရဲ့စတုတ္ထအကြီးဆုံးမြို့အတွက်.
ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံရဲ့စန်တာ Justa မီးရထားဘူတာရုံတစ်ဦး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အရှိန်အလွန်မြန်သော, ငါးလိုင်းကိုခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ချိတ်ဆက် 17 အဓိကစပိန်မြို့ကြီးများ, ဒါကြောင့်ရထားထက်သွားလာရန်မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်.
သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ,, သငျသညျအသက်တော်-တာဘုရားကျောင်းမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနှင့်တစ်ဦး Tapas ခရီးစဉ်အပေါ်သွားပါသေချာအောင် – သင်လုပ်နိုင်သည် book with an organized group.
အကောင်းဆုံးရှုခင်းများကြည့်သည်ရထားလည်ပတ်ခဲ့ဥရောပမြို့ကြီးများ: မြူးနစ်, ဂျာမနီ
မြူးနစ်သည့် BMW ကားဌာနချုပ်နှင့် Allianz Arena နှင့် Nymphenburg တူသောသမိုင်းဆိုင်ရာဆိုဒ်များကဲ့သို့အသစ်ကိုအထင်ကရအဆောက်အ၏လှပသောရောနှောဖြစ်ပါသည် နန်းတော် and the Munich Hofgarten and that is why we have put her on our European cities best visited by train.
လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါ ရထားဂျာမဏီ, သငျသညျဗင်းနစ်စခုန်နိုင်ပါတယ်, Verona မှတဆင့်ခရီးသွားလာ, Trento, နှင့် Innsbruck ရှိ, နှင့် – ပဲခုနစျပါးနာရီအကြာ – အတွက်ဖြစ် မြူးနစ်. ရထားလမ်းတလျှောက်တွင်အဆိုပါအမြင်များ breathtaking နေကြတယ်. အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အီတလီကျေးရွာများ လမ်းအတွက်လမ်းပါစေ အဲလ်ပ်တောင်တန်း ထို့နောက် မိုက် မြူးနစ်အတွက်မရောက်မီ.
သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ,, အချို့သောတစ်ကြိုးစားကြဖို့သေချာပါစေ ‘Munchner Weiswurst'', ဝက်အူချောင်းလောလောလတ်လတ်မီးဖုတ်ထားသော pretzels နှင့်ချိုမြိန်မုန်ညင်းနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်. အဆိုပါကျော်ကြားတဲ့ဘာသာစကား Bavarian ဘီယာတစ်ဦးနှင့်အတူကဆင်းလျှော်ခြင်း.
သင်တို့သည်ဤအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဥရောပမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မှုတ်သွင်းနေကြ? အကောင်းဆုံးရထားလည်ပတ်ခဲ့ဥရောပမြို့ကြီးများမှာအကောင်းဆုံးရထားလက်မှတ်တွေစျေးနှုန်းများမှာကြိုတင်ဘွတ်ကင်နိုင်ပါသည် Saveatrain.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F3-european-cities-best-visited-by-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
ရထားခရီးသွား ခရီးသွား travelbelgium travelfrance travelspain